चुनावी समीक्षा र गठबन्धनको भविष्य
काठमाडाैं | जेठ १९, २०७९
राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा विश्लेषण र आगामी चुनावी रणनीति बनाउने काममा व्यस्त छन् । स्थानीय तह चुनावबाट ठूलो दल बनेको कांग्रेसभित्र आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबारे अनौपचारिक छलफल शुरू भइसकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन नतिजाबारे सहयात्री दलहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाबारे कांग्रेसको समीक्षा, गठबन्धनमा रहेका दलहरूको असन्तुष्टिप्रति कांग्रेसको धारणा, आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य आदिका बारेमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग लोकान्तरका उद्धव थापाले कुराकानी गरेका छन् ।
स्थानीय तहको चुनावमा पाँचदलीय गठबन्धन भयो । कांग्रेसको सिट त धेरै आयो तर, यो गठबन्धन कांग्रेसको पक्षमा सफल भयो कि भएन ?
– एउटा सत्ताको गठबन्धन छ, एउटा चुनावको तालमेल छ । सरकार चलाउँदा गठबन्धनको निश्चित सिद्धान्त, कार्यक्रम बनेको छ । हुन त साझा गठबन्धन भएर ७५३ स्थानमै तालमेल भएजस्तो भ्रम पनि छ । यथार्थ त्यो होइन । गठबन्धनमा रहेका सबै दलको गरेर प्रमुख पदमा १६ सयभन्दा बढी उम्मेदवार थिए । स्थानीय तह त ७५३ मात्रै थियो । यसको अर्थ हो– तालमेल देशव्यापी भएको होइन । ७५३ मध्ये ६३४ स्थानीय तहको प्रमुखमा कांग्रेसको उम्मेदवारी थियो ।
देशव्यापी तालमेल भएको होइन । जति ठाउँमा तालमेल भएको छ, ती सबै ठाउँमा दुई खालको विश्लेषण छन् । तालमेलको कारण जितेको कैयौँ ठाउँहरू छन् । तालमेल भएर पनि हारेको तर, अघिल्लो चुनावमा एक्लै जितेका ठाउँहरू पनि छन् । तालमेल नगरी कांग्रेसले एक्लै लडेर जितेका स्थानीय तह पनि छन् । यसलाई मिश्रित रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
कांग्रेसको मात्रै होइन, गठबन्धनमा रहेका दलहरूको धारणा के बन्छ, उहाँहरूले निर्वाचनको नतिजालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नआइनकन अहिले तालमेल गरेरै अगाडि जान्छौं भन्दा पनि गलत हुन्छ । अब हामी ठूला दल भयौं, खोला तरियो लौरो बिर्सियो भन्न थालियो भने पनि गलत हुन्छ । यसका लागि समय आउनुपर्‍यो ।
तालमेल नगरेको भए कांग्रेसको पक्षमा अझ राम्रो नजिता आउँथ्यो त ?
– अहिले त्यसो पनि नभनौँ, किनभने त्यो काल्पनिक कुरा हुन्छ । जस्तै, काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका ३० वर्षपछि कांग्रेसले एक्लै जितेको हो । पूर्वमा इलाम नगरपालिका २०४९ पछि अहिले पहिलोपटक कांग्रेसले जितेको हो । त्यहाँ पनि कांग्रेसले तालमेल गरेको थिएन । कतिपय स्थानीय तहमा तालमेल नगरी जितेको कुरालाई देखाएर तालमेल नै गलत थियो भन्ने हुँदै होइन ।
तर, तालमेलका कारणले कतिपय गाउँ नगरहरू राम्रोसँग जितिएको छ भन्दै गर्दा तालमेल नै प्रथम र अन्तिम होइन । दुई प्रकृतिले विजय हासिल भएको छ, एउटा तालमेलको कारणले अर्को, एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेको कारणले । यसपछाडिको मुख्य कारण, कम्युनिष्ट पार्टीमा आएको विभाजन, कांग्रेसको अधिवेशनपछि सबै तहमा आएको नेतृत्वको तरोताजगी आदि छन् ।
तालमेलपछिको चुनावी नतिजामा सहयात्री दलहरूभित्रै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ । चुनावमा सहयात्री दलहरूलाई कांग्रेसबाट असहयोग भएकै हो कि उनीहरूले गुनासो गरेका मात्रै हुन् ?
– उहाँहरूले कुन रूपमा के प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छ म त्यसमा जान चाहन्नँ । कतिपयचाहिँ उहाँहरूमा रहेको बुझाइको कमजोरी हो । विराटनगरमा जसपाले उपमेयर नजितेको विषयलाई हेरेर सबैतिर धारणा बनाउन मिल्दैन । जितेजति आफ्नो बलमा हारेजति, कांग्रेसको कारणले भन्न थालियो भने पनि त्यसको अर्थ हुँदैन । कांग्रेसले पनि गठबन्धन गरेको ठाउँमा हारेको छ ।
झापामा नै कांग्रेसले जितिरहेको ठाउँमा यसपटक हारेको छ । हरेक ठाउँको एकै खालको मनोविज्ञान हुँदैन । उहाँहरूले काठमाडौंको उपप्रमुख हार्नुभयो, प्रमुख त हामीले पनि हार्‍यौं । हेटौंडामा भर्खर खुलेको दलका लागि अहिलेको निर्वाचन परिचय कार्यक्रम जस्तो थियो । तर, उहाँहरूले नै प्रमुखमा जित्नुभएको छ । पोखरामा धनराज आचार्य मेयरमा जितेको हेर्ने कि नहेर्ने ? अहिले सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरेर जवाफ दिन चाहन्न र दिनु पनि हुँदैन । चुनावमा मिश्रित ढंगले परिणाम आएको छ र त्यसको वस्तुनिष्ठ ढंगले संयमका साथ समीक्षा गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तह चुनावको नतिजाको जगमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा पनि अहिलेकै गठबन्धन तालेमल गनेर जाने परिस्थिति बनेको छ कि गठबन्धनको अवस्था फेरिन सक्छ ?
– यो अहिले नै भनिहाल्ने बेला भएको छ । पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन नै समग्र रूपमा सकिएको छैन । परिणाम आइसकेकै छैन । जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव हुन बाँकी छ । भएको निर्वाचनको वस्तुगत समीक्षा संस्थागत ढंगले नभई, पार्टीभित्र के–के धारणा बन्छन्, त्यो नलिई आगामी चुनावको बारेमा भनिहाल्ने अवस्था बनेको छैन ।
कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्रीले आगामी चुनावको मितिबारे परामर्श नै गर्न थालिसक्नुभयो भन्ने चर्चा छ । अब त प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको लागि पार्टीहरूले रणनीति बनाउने र तयारी थाल्ने बेला हुन लागेन र ?
– पहिले भएको चुनावको समीक्षा नै नगरी अर्को चुनावको तयारीमा जाने बेला भएकै छैन । तालमेल भएर पति कतिपय ठाउँमा किन जित्न सकिएन, तालमेल नभएको ठाउँमा सजिलै जित्ने अवस्था कसरी भयो भन्ने कुराको तल्लो तहबाट सबै समीक्षा आइसकेपछि संयमतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, स्थानीय चुनावबाट हामी ठूलो दल भयौं होला, गणितीय हिसाबले ठूलो दल भएको, जितेको र हारेर सानो दल भएको सबै अनुभव हामीसँग छ । त्यसो हुँदा ठूलो दल भएको अहंकार पार्टी केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म कहीँ पनि आउनुहुँदैन । हामीले पाँच वर्षका लागि जितेका हौं र सबै जीतहरू अस्थायी हुन्छन् । पहिलो हुँदा होस् वा दोस्रो हुँदा, हामी जिम्मेवार हिसाबले प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा यसअघि जितेको ठाउँमा अहिले जित्न नसक्ने देशव्यापी प्रवृत्ति नै देखियो । यही प्रवृत्ति कायम रहँदा यसपटक जितेको ठाउँ अर्को चुनावमा जोगाउन नसक्ने अवस्था बन्ला । यसबाट जोगिनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिले के कुरालाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ला ?
– एउटा दलले जितेको छ तर, अर्को चुनावमा गुमाएको छ । त्यसपछाडिको कारण, काम गर्दैगर्दा जसले काम गरेको हुन्छ कमजोरी उसैबाट हुने हो । कमजोरी भइरहेको पाटो चर्चामा बढी गइरहेको हुन्छ । गरेको कुरा बुझाउन नसकिरहेको हुन्छ ।
देशभरीको स्थानीय तहका प्रमुखहरूका लागि एउटा वाक्यमा तीनवटा शब्द भन्छु– थोरै बोल्ने, धेरै सुन्ने, केही गर्ने । मेरो पनि जीवन दर्शन नै थोरै बोल्ने, धेरै सुन्ने र केहीचाहिँ गर्ने भन्ने छ । सबै काम एकैपटक गर्छु भनेर सकिँदैन । जनताको बीचमा जाँदा निर्वाचनपूर्व दलको उम्मेदवार थिए, निर्वाचित भएपछि जनताको प्रतिनिधि हुँ भन्ने साझा भावनाले सोच्नैपर्छ ।
निर्वाचित भएका व्यक्तिहरू को कुन दलसँग आस्था राख्नुहुन्छ त्यो भिन्नै कुरा हो । उहाँहरू जनताद्वारा निर्वाचित हुनुभएको छ । अब उहाँहरूको परीक्षा शुरू भएको छ । उहाँहरूले राम्रो गर्दा उहाँहरू आबद्ध दलका लागि मात्रै होइन समाजको रुपान्तरणसँग, लोकतन्त्रको रक्षासँग त्यो विषय गाँसिन्छ । जनताको भावनासँग गाँसिन्छ । स्थानीय तहमा जनतासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा ठूला शहरमा नै स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते । शहरी मतदाता ठूला राजनीतिक दलबाट निरपेक्ष हुँदै गएको विश्लेषण पनि गरिन्छ । काठमाडौं महानगरमा नै गठबन्धन स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग पराजित हुने अवस्था आयो । तपाईंको विचारमा यस्तो हुनाको कारण के हो ?
– स्वतन्त्र भनेर त अन्यन्त्र पनि जितेका छन् तर, खासगरी काठमाडौं र धरानलाई विशेष रूपमा हेर्नुपर्छ । अन्यत्र दलका विद्रोहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा जितेको हो । तर, साँच्चै स्वतन्त्र भएर उभिएका दुई जना काठमाडौंका बालेन साह र धरानका हर्क साम्पाङ हुन् । उनीहरूले जित्दै गर्दा त्यो मतलाई हामीले सकारात्मक ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको रूपान्तरण जनताले चाहेको हो ।
विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता राजनीतिक मानिसहरू परिचालन हुँदै गर्दा बन्द कोठाबाट देशलाई बुझ्ने होइन । झ्याल खोलेर हेर्नुपर्छ । बग्दै गरेको हावामा के बग्दै छ, शहरमा गुञ्जिँदै गरेको आवाजमा के बोलिँदै छ भन्ने कुरा सुन्नुपर्‍यो । त्यो सुनेबमोजिम उठेका प्रश्नहरूको नयाँ उत्तर पस्किनुपर्‍यो । प्रश्न नयाँ आइरहेको छ, तर उत्तरचाहिँ पुरानै पस्किने हो भने ठीक भएन । त्यसकारण चुनावमा उनीहरूको विजयले दलहरूलाई रुपान्तरित हुन सन्देश दिएको छ ।
कांग्रेस, एमालेजस्ता दलहरूलाई काठमाडौंका जनताले मत नदिँदै गर्दा पनि वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएको वैकल्पिक दल पनि त थियो नि ! तर, मत त्यहाँ गएन । तसर्थ, यहीँ ठूला दलहरूको रुपान्तरण नै खोजेको हो ।
मतदाताले अवस्थासँगको रूष्टता व्यक्त गरेका हुन्, व्यवस्थासँग होइन । अवस्थालाई सुधार गरौं, व्यवस्थालाई सदृढीकरण गरौं भनेर दिएको मत हो । यो व्यवस्थाकै विरुद्ध जान चाहन्थे भने त अर्को पनि उम्मेदवार थियो नि त । राप्रपाको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो । काठमाडौंका मतदाताले दिएको मतलाई आवेगमा दिएको मत मात्रै सोच्नुहुँदैन । उहाँहरूमा आवेग थियो तर, त्यसमा विवेक पनि मिसिएको थियो । हामीलाई जसरी प्रश्न ठड्याइएको छ, त्यसलाई जिम्मेवार रूपमा लिनुपर्छ ।
यो चुनावबाट अर्को पनि महत्त्वपूर्ण सन्देश आएको छ । काठमाडौंमा नेवा राज्य हुनुपर्छ भनेर नारा जुलुस भएको थियो कुनैबेला । नेवा भनिएको भूगोलमा एउटा मधेशीको छोरा मेयर बन्न सक्यो ।
कुनै बेला काठमाडौं आउँदै गरेका धोती लगाएका मानिसहरूले अपहेलित हुनुपर्‍यो, काठमाडौं मेरो भएन भन्ने पनि अनुभूति थियो । आज त्यही काठमाडौंले ठूलो हृदय बनाएर मधेशी समुदायको मान्छेलाई मेयर बनाएको छ ।
अर्कातर्फ, टोपी लगाएको मानिसले मधेशमा जाँदै गर्दा भूगोल मेरो भएन भन्ने सोचेको थियो भने आज त्यही मधेशमा नेवारको छोरो वीरगञ्जमा मेयर भएको छ । मधेशीको छोरो काठमाडौंमा मेयर, नेवारको छोरो मधेशमा मेयर भएको छ । यसले समाजको अन्तरघुलन बढेको छ भन्ने देखाउँछ । समाजभित्रको ग्राह्यता र स्वीकार्यता बढेको छ भन्ने देखाउँछ । लोकतन्त्रमा मेरो दलको जीत सबै सुन्दर हो, अरूको जीतचाहिँ सबै नकारात्मक हो भन्ने होइन । त्यसभित्रको सकारात्मक कुरालाई बुझ्नुपर्छ । यसले लोकतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश गएको छ ।
को कता आस्था राख्छौं दोस्रो कुरा, तर हिजो प्रतिगमनकोविरुद्ध एक भएर लागेका दलहरू कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीबीचको सहकार्यको औचित्य सकिएको छैन ।
स्थानीय तहको चुनावअघि तपाईंहरू नै चुनावपछि माओवादी केन्द्र वामपन्थी गठबन्धनको पक्षमा जाने आशंका व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो । चुनावको नतिजापछि वामपन्थी गठबन्धनको बतास चल्न थालेको छ । हिजो तपाईंहरूले गरेको आशंका अब सत्यतामा परिणत हुने लक्षण देखिन थालेको हो ?
– कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हिजो एकाएक भएको एकता त्यो बुझ्न नसकेको विषय थियो । उहाँहरूले कसरी बुझ्नुभएको थियो त्यो अलग कुरा हो, तर समाजले बुझ्न नसकेको विषय थियो भन्ने कुरा उहाँहरूले नै निश्चित समय गुज्रेपछि बुझ्नुभएको थियो ।
स्वाभाविक छ कि संविधानले प्रत्याभूत गरेबमोजिम आ–आफ्नो निकटता, आ–आफ्नो दूरी र बुझाइका विश्लेषण हुन्छन् । अहिले उहाँहरू कसरी जान चाहनुहुन्छ त्यो मैले भन्ने विषय भएन ।
अबको संसदीय चुनाव कात्तिकमा, मंसिरमा कि फागुनमा ?
– यो मैले भनिहाल्ने विषयवस्तु होइन । सरकारले दलहरूसँग र निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा तय गर्ने विषय हो । मंसिर कि फागुन भनेर धेरै बहस गरिरहनुपर्ने विषय पनि होइन । स्थानीय तह निर्वाचनको देशभरको अवस्थाको समीक्षा गरिसकेपछि दलहरूले उपयुक्त समय निर्धारण गरुन् ।
भर्खरै भएको निर्वाचनले कूलिङ पिरियड पनि पाओस् र २०८४ सालमा तीनै तहको चुनाव एकै दिन गर्न सक्ने अवस्था पनि बनोस् । त्यहाँसम्म जानसक्ने लचकता अपनाएर अगाडि ल्याउने त्यो चाहिँ मिलाएर गर्नुपर्छ । अहिले तत्काल वर्षाको समय छ । पहाडी मुलुकमा बाढी पहिरोको समस्या हुनसक्छ । कसले कति धेरै जितेको छ भनेर झ्याप्प प्यारासुट जम्प गरेजस्तो गरेर चुनाव गराउने विषय पनि होइन ।
संसदीय निर्वाचनको मितिबारे पार्टीभित्र अनौपचारिक कुराकानी भइरहेका छन् । निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण, तयारी, राजनीतिक परिस्थिति विचार गरेर आगामी निर्वाचनको मिति तय हुनुपर्छ ।
निर्मला पन्त हत्या घटनाको अनुसन्धान पहिलो प्राथमिकता हो : आईजीपी सिंह